অ্যান্ড্রয়েডের জন্য Wun Zinn - APK ডাউনলোড
হোম » অ্যাপগুলি » বই ও রেফারেন্স » Wun Zinn
ডাউনলোড করুন XAPK(18.0 MB)
Get the latest update of Wun Zinn on Android
Wun Zinn এর বিবরণ
လွယ်ကူသက်သာရိုးရှင်းစွာ ဝန်ဇင်းမှာ စာဖတ်ပါ။
ဝန်ဇင်းစာအုပ်စင် ဆိုတာ လက်ထဲမှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ စာရေးဆရာ (၂,၀၀၀) ကျော်တို့ရဲ့ စာပေအမျိုးအစား စုံလင်တဲ့ စာအုပ်ပေါင်း (၂၀,၀၀၀) ကျော်ကို စျေးနှုန်းသက်သာစွာ ဝယ်ယူ၊ ငှားရမ်း ဖတ်ရှုနိုင်မယ့် App ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခမဲ့ စာအုပ်ပေါင်း (၃,၀၀၀) ကျော်ကိုလဲ ဝန်ဇင်းမှာ အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်ကြီး စာရေးဆရာတွေရဲ့ ဂန္တဝင်လက်ရာတွေ၊ ဘာသာပြန်စာပေတွေ၊ မြန်မာကာတွန်း ရုပ်ပြစာအုပ်တွေကိုလည်း ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်၊ သုတရသ ကဏ္ဍစုံ မြန်မာအသံထွက် စာအုပ်ပေါင်း (၇၀၀) ကျော် ကိုလည်း အလွယ်တကူ နားဆင်နိုင်မှာပါ။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး... အနောက်တိုင်း စိတ်ကူးယဉ် သိုင်းစာစဉ် (Xianxia) တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူတို့အတွက်လည်း အွန်လိုင်းစာပေကဏ္ဍမှာ အမျိုးအစားစုံလင်တဲ့ သိုင်းစာစဉ်တွေကို ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလို လူငယ်တွေအတွက် BL, GL Fic တွေနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ ရင်ထိတ်စရာ သဘာဝလွန်အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်း ရှာဖွေဖတ်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာအုပ် ငှားရမ်းဖတ်ရှုရာမှာလည်း တစ်ရက်ကို (၃၇.၅) ကျပ်နှုန်းနဲ့ တစ်ကြိမ်ငှားပါက စာအုပ်လေးအုပ်အထိ ငှားရမ်းဖတ်ရှုနိုင်သလို နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ငွေကောက်ခံတဲ့ စနစ်နဲ့ ကောက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုမှာလဲ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဖုန်းဘေလ်ဖြင့် ငွေပေးချေမှုအပြင် KPay, WavePay, AyaPay ကဲ့သို့သော မိုဘိုင်းဖုန်းငွေပေးချေမှုများဖြင့်လဲ ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်ဖတ်ရာမှာ PDF ပုံစံအပြင် စာအုပ်ကိုင်ဖတ်ရတဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ရရှိစေမယ့် E-pub Reader စနစ်ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိမ်မှာနေရင်း စာအုပ် (Physical Book) မှာယူနိုင်တဲ့ နည်းစနစ်ကိုလည်း Wun Zinn to Home စာအုပ် အိမ်အရောက်ပို့ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Application ထဲမှာ ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ်မျိုးစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ ရရှိနိုင်တာက ဝန်ဇင်း တစ်ခုတည်းပဲ ရှိတာပါ။
eReader အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့လည်း Account ကို ဖုန်းထဲမှာ Sync လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ မိမိ ဖတ်လက်စ စာအုပ်ကို eReader မှာပါ ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်မှာပါ ။ မိုဘိုင်းဖုန်း ၊ Tablet ၊ eReader ရှိတဲ့သူတိုင်း စာဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် ဝန်ဇင်းက အမြဲတမ်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ရှိပါတယ်။
Enjoy the best reading experience with Wun Zinn.
Wun Zinn is the biggest eBook store in Myanmar where you can dive into over 20,000+ books from 2,000+ famous writers. Many e-Books, Audiobooks and Comics are available for your choice at hand.
Over 3,000+ Books are also available to read for FREE!
The categories includes Classic, Translation, Fantasy books, and Wuxia & Xian Xia Novels, Thriller novels, Horror & mystery stories, Romance, Boy's Love, Girl's Love Fictions and more! Not only with your smartphone but also very convenient to read with your Tablets and e-Readers.
Download for free now and find your favorite book today!
Download books and read them offline anytime, anywhere.
Over 3,000+ Free e-Books
New Books with different category are updated daily.
Can subscribe with only 37.5 Ks per day for two weeks package.
Read FREE Myanmar Books every Friday.
Night mode and font settings to meet your preferences.
Appetizer, free book, many categories, automatically remembers the last reading page position, support day and night reading support, arrange the author name with Myanmar alphabet, feels like reading Myanmar Book in your hand.
Simply sync your account to easily pick up where you left off, whether you are on your eReader.
Support Smartphone, Tablet, e-Readers
In-App, you can easily order your favorite Physical Books to home.
Wun Zinn ট্যাগ
বিভাগ: বিনামূল্যে বই ও রেফারেন্স অ্যাপ
প্রকাশ করার তারিখ: 2022-05-01
অ্যাপ আপলোড করেছেন: ماهر وسوف
সাম্প্রতিক সংস্করণ: 5.0.7
এতে আপডেট: 2022-05-04
ফাইল SHA1: f85914e07a3a34e6f69f6c35e60145a57ba5c9b3
ফাইলের আকার: 18.0 MB
এতে আপডেট: 2022-01-27
অ্যাপ আপলোড করেছেন: เดชา มึนจัง
ফাইল SHA1: 067e64ba11e17c0ffaf5a689d6c6cf0fd28fd4e2
ফাইলের আকার: 17.8 MB
এতে আপডেট: 2021-12-09
অ্যাপ আপলোড করেছেন: Nhất Lâm
ফাইল SHA1: 395468140cbbc768cd840bbc49033462995d52fe
ফাইলের আকার: 13.2 MB
এতে আপডেট: 2021-08-16
ফাইল SHA1: cd56050cc5cf9acf4279e20d0060e8cad3280c98
ফাইলের আকার: 20.9 MB
Wun Zinn বিকল্প
Bagan Innovation Technology থেকে আরো অ্যাপগুলি
ရွှေနားဆင် Myanmar Audio Books